DEG DEG: Rooble oo jawaab culus ka bixiyey hadalkii Farmaajo | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii DEG DEG: Rooble oo jawaab culus ka bixiyey hadalkii Farmaajo
DEG DEG: Rooble oo jawaab culus ka bixiyey hadalkii Farmaajo
Muqdisho (Dalkaan.com) – Ra’isulwasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa jawaab kulul ka bixiyey hadalkii kasoo yeeray madaxweynaha Soomaaliya ee waqtigiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Rooble ayaa sheegay in musharax gaar ah laga yeeli doonin inuu ku takri falo doorashada Soomaaliya.
Halkaan hoose ka akhriso jawaabta Rooble
Raheem Sterling ayaa dhaliyay goolkiisii ​​100-aad ee Premier League isagoo ka caawiyay Manchester City inay 1-0 kaga badiyaan garoonkeeda sabtidii 10 ciyaaryahan oo...
HOOYO SOMALIYEED OO 2-KALYOOD AY DHINTEEN ALLOW SAHAL UMUURAHA.
Wareysi: Wiil kasoo goostay Eritrea oo soo bandhigay xogta dhalinyaradii loo...
Xaaladda Guriceel. Ahlu Sunna oo la hareereyay iyo Galmudug oo colaad...
Lafta Gareen ma lagu cabsiin karaa Mukhtaar Roobow. Rooble iyo kooxdiisu...